Hot vakanyika kwakakurudzira Wire - China Hebei Samsung Metal Wire Mesh
Hot vakanyika kwakakurudzira Wire
Hot vakanyika kwakakurudzira Wire, aizivikanwawo hot-Dip zinc-kuifukidza simbi waya, kana kwakakurudzira simbi waya. Hot vakanyika kwakakurudzira Wire Material: yakaderera kabhoni simbi kubudiswa nokuswedera, hot-Dip zingi unhani. Hot vakanyika kwakakurudzira Wire Features: 1. Excellent mukana wokushandiswa uye softness 2. Inzwi mashandisirwo: Net kugadzira, dzinopoterera, baling, akarembera uye zvichingodaro. Hot vakanyika kwakakurudzira Wire Processing: VaG kunobereka unhu hwakanaka hot-Dip kwakakurudzira simbi waya kubva sarudzo shoma kabhoni simbi waya, kuburikidza nedanho ...
FOB Price: US $ 450 - 1,050 / tani
Min.Order Quantity: 10 arşive tani / arşive matani
Supply Mano: 65 tani / matani por Day
Hot vakanyika kwakakurudzira Wire , aizivikanwawo hot-Dip zinc-kuifukidza simbi waya, kana kwakakurudzira simbi waya.
Hot vakanyika kwakakurudzira Wire Features:
1. Excellent mukana wokushandiswa uye softness
2. Inzwi mashandisirwo: Net kugadzira, dzinopoterera, baling, akarembera uye zvichingodaro.
Hot vakanyika kwakakurudzira Wire Processing:
VaG kunobereka unhu hwakanaka hot-Dip kwakakurudzira simbi waya kubva sarudzo shoma kabhoni simbi waya, kuburikidza nedanho waya kudhirowa, iine acid Washing uye ngura nokubvisa, annealing uye coiled.
Hot akanyika Wire kwakakurudzira Applications:
Hot-Dip kwakakurudzira waya ari kuchinja zvikuru uye munyoro, dzakawanda kushandiswa kuvaka, handicrafts, yakarukwa waya pajira riya, aiva nzira fence pajira riya, kavha mishonga uye zvimwe zvakaita sekurima nezuva.
Hot vakanyika kwakakurudzira Wire Specification:
SWG muna mm
BWG muna mm
In arşive System mm
23 # kusvika 34 # uyewo dziripo kwakakurudzira simbi waya.
Previous: PVC Coated Wire
Next: Electro kwakakurudzira Wire